Anatihazo Isotry – Efa namoaka mpilalao nankany ivelany ny Kianja Mainty - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Anatihazo Isotry – Efa namoaka mpilalao nankany ivelany ny Kianja Mainty
Niarahaba ny ekipan'ny FC Tricolore, ekipa tompondaka ny sefo fokontany, Ravalison Jacky
24 taona amin’ity no nanorenana ny Kianja Mainty, filalaovana kitra ao afovoan-tanànan’ Anatihazo Isotry. Ravalison Jacky, sefo fokontany, amin’izao fotoana izao, no anisan’ny mpanorina io kianja io. « Toerana fanariam-pako io toerana io taloha. Noho ny fahasahiranana mitady kianja ilalaovana dia nanapa-kevitra izahay, rehefa nifampidinika tamin’ny manodidina, fa havadika ho kianja hilalaovana izy io. Na hatramin’ny vovoka saribao aza, natototra teo ka rehefa misy milalao,dia mitora-jofo, lasa maintimainty noho izany », hoy Ravalison Jacky, vao 28 taona tamin’izany. Rehefa voafidy ho filoham-pokontany izy ny taona 1996 no natao ny fanotorana ny tany.
« Ny taona 1992 hatramin’ny 1997, ny ekipan’Anatihazo Isotry, mpilalao tao amin’ny Kianja Mainty hatrany no nandrombaka ny amboaran’ny Fihezama Avaradrano », hoy Ravalison Jacky. Efa misy ireo mpilalao no lasan’ ny ekipa lehibe. Nisy mihitsy aza niampita ranomasina. Mitohy ny fitaizana tanora ara-panatanjahantena ao amin’ny Kianja Mainty. Ny FC Tricolore izao no nahazo ny amboara farany tamin’ny taona 2012.Ny US Tampon teo amin’ny lalao Open raha ny Aigle Force tamin’ny sokajy « minime ».
Baolina kitra, Mpanoratra Rijakely, 12.01.2013, 10:20	FIARAHAMONINA